Burcadda internet-ka oo la wareegay adeega sarifka Online-ka | Hangool News
Burcad baraha internet-ka ayaa BBC-da u sheegay in ay xoog kula wareegeen qalabka iyo kumbuutarada shirkad ka shaqeysa sarifka caalamiga ah, ayna ka doonayaan $6 milyan oo dollar oo madax-furasho ah.
Kooxda oo loo garanayo Sodinokibi waxay maalmihii ugu horreeyay ee sannadka weerar ku qaadeen shabakadda Travelex, iyagoo shirkadda ku qasbay in bogaggeeda illaa 30 dal oo daafaha caalamka ah ay xirto, si ay uga hortagto feyriska ayna u ilaaliso xogta macaamiisheeda.
Burcaddan internet-ka oo sidoo kale loo garanayo REvil, waxay sheegtay in muddo lix bilood ah ay maamulayeen adeegga hoose ee kumbuyuutarada shirkadda, ayna la bexeen macluumaadka xasaasiga ah ee macaamiisha shirkaddaas.
Taariikhda dhalashada, macluumaadka kaararka bangiga, iyo lambarada ceymiska qaranka ee macaamiisha oo dhan in ay gacanta ku hayaan ayey BBC u sheegeen.
Waxaa lagala xiriiray bog ay burcadda leedahay oo dadka ay dhibaateeyaan kala xiriiri karaan, kaas oo adeegsada barta TOR.
Burcaddan internet-ka waxay sheegeen: “Haddii lacagta la bixiyo, waan iska tireynaa dhammaan macluumaadka aan hayno, waxaana dib u celineynaa xiriirka shirkadda oo dhan ee gacanta aan ku hayno.
“Haddii laba maalmood ay lacagtaas ku bixin waayaan, way laba jibbaarmeysaa. Ka dib waxay haystaan toddobo maalmood oo kale. Ka dibna waxaan baahineynaa dhammaan xogta oo aan iibsaneyno.”
Booliska London – oo hoggaaminaya baaritaanka la xiriira weerarkan – waxay soo saareen warbixin ay ku sheegeen in loo soo gudbiyay arrintan ah weerar internet-ka oo madax-furasho lagu doonayo oo lagu haysto macluumaadka shirkad sarifka ka shaqeyso oo caalami ah. Baaritaanka arrintan weli wuu socdaa”.
“Waa dhibaato laga argagaxo”
Sida uu sheegay Fabian Wosar, oo khabiir ku ah arrimahan, kana tirsan Shirkadda amniga internet-ka ee Emsisoft, weerarka wuxuu leeyahay dhammaan calaamadaha lagu garanayo burcadda REvil.
“Arrinta aan ka ognahay dhacdooyiinkii hore iyo howlgalada burcadda ayaa sababaya in aan aaminno in REvil ay dhibaato xoog leh u geysatay Travelex,” ayuu yiri.
“Kooxda REvil/Sodinokibi waa mid awood adag lahayd in muddo ah. Lacagta madax-furashada ee ay dalbadeen waa mid ay aalaaba ka qaadaan shirkadaha la midka ah Travelex.
“In macluumaad la xado waxay aasaas u tahay gorgortanka lala galayo shirkadaha aan dooneyn in madax-furasho ay bixiyaan. Fikradda waa in la isku hubeeyo waxa la xaday si shirkadaha loogu cadaadiyo bixinta lacagta”.
Travelex waxay ku adkeysaneysaa in aysan jirin macluumaad macaamiil oo lala baxay, balse kama aysan hadlin in akhbaarta ay halis ku jirto.
Bogagga shirkadda ee Yurub iyo Aasiya ayaa hawada ka maqnaa tan iyo 31-dii December ee 2019-kii.
Macaamiisha waxaa loo diray farriimo loogu sheegay weerarka, balse su’aalaha la weydiinayo waxay uga jawaabayaan baraha Bulshada.
“Jawaabta bulshada ee Travelex waa arrin dhibaato ah oo laga argagaxo,” ayuu yiri Kevin Beaumont oo ah baare arrimaha amniga internet-ka.
Go’aanka Travelex ee bogaggeeda internet-ka ay ku xirtay wuxuu sababayaa in shirkadaha kale ee xiriirka uu kala dhexeeyo aysan sarifi karin lacagta online-ka.
Image captionNatalie Whiting waxay safartay lacag la’aan iyadoo shirkaddan isku haleyneysayfrom
Macaamiisha Travelex waxay sheegeen in ay niyad jab dareemayaan ka dib markii lacag la’aan ay ku dhacday intii safarada ay ku jireen, shirkaddana aysan lacag ka helin, taas oo hadda bartamaha uga jirto iska difaacidda weerar culus oo lagu soo qaaday adeegyadeeda.
Macaamiishaas waxaa ka mid ah Natalie Whiting oo Britain u dhalatay. Waxay barta Travelex ka dalbatay £1,000 oo ay dooneysay in ay u badasho lacagta euro laakiin weli wax jawaab ah ma soo gaarin.
“Ma helin in lacagteyda dib la iigu soo celiyo, weli waxaan taaganahay quus,” ayey u sheegtay BBC.